CPC ဗဟိုကော်မတီ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီတို့က တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အောင်မြင်မှုများအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု - Xinhua News Agency
CPC ဗဟိုကော်မတီ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီတို့က တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အောင်မြင်မှုများအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု
China Sport မြန်မာ-中文
China Sport မြန်မာ-ENG
ကျန်းကျားခိုဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ကျေးရွာ၌ ဆောင်းရာသီမသန်စွမ်းအိုလံပစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲလုပ်ငန်များစတင်
အိုလံပစ်အလံအား မီလန်-ကောတီနာ ၂၀၂၆ သို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်
နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ(IOC) က တရုတ်ပြည်သူများအား အိုလံပစ်ဆုဖလား ဂုဏ်ပြုပေးအပ်
ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွင်း တရုတ်အားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ဘက်စုံစွမ်းဆောင်ရည်သည် မျှော်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်း Ni Huizhong ကပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့၌ ပေကျင်း ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ အမျိုးသားအားကစားရုံအတွင်းသို့ စီတန်းချီတက်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အိုလံပစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီတို့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ပြီးဆုံးသွားသည့် ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီပြိုင်ပွဲ၌ “သမိုင်းတွင် အကောင်းဆုံး”အဖြစ် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာတစ်စောင်ကို တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေတံဆိပ်ဆု ၉ ခု ၊ ငွေတံဆိပ်ဆု ၄ ခု နှင့် ကြေးတံဆိပ်ဆု ၂ခု ရရှိခဲ့သည့် တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် သမိုင်းတစ်လျှောက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူများအတွက် ဂုဏ်ကျက်သရေတိုးစေခြင်း နှင့် ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ် အောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပရေးအတွက် အရေးကြီးသော ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ချီးကျူး သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“အမိမြေနဲ့ပြည်သူတွေက သင်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။”ဟု သဝဏ်လွှာတွင် ဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားသည်။အိုလံပစ်စိတ်ဓာတ် နှင့် တရုတ်အားကစားသမားပီသမှုကို အထင်အရှားသရုပ်ဖော်သည့် အိုလံပစ်အားကစားကွင်း၌ ခေတ်သစ်တွင် အားကစားသမားများအဖြစ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ တက်ကြွသောစိတ်ဓာတ် နှင့် အားကစား စွမ်းပကားကို ပြသခဲ့ကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အားကစားသမားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကာ အပြန်အလှန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီး ဖလှယ်မှုများအား တိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား မြှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
“သင်တို့ရဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဆောင်းရာသီအားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထပ်မံမြှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တရုတ်သားစဉ်မြေးဆက်အားလုံးရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို စေ့ဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်။”ဟု မှတ်ချက်ပြုဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုများသည် သက်ဆိုင်သည့်ကဏ္ဍအားလုံးတွင် တရုတ်နိုင်ငံအား ခေတ်မီဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်ရာတွင် ပြင်းပြသောလှုံ့ဆော်အားပေးမှုကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အားကစားယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန် နှင့် “ဆောင်းရာသီအားကစားတွင် ပြည်သူ သန်း ၃၀၀ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း”အမြတ်အစွန်းများအား တိုးချဲ့ရာတွင် အသစ် နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန် ၊ အားကစား နှင့် အမျိုးသားအားသစ်လောင်းခြင်း တရုတ်လူမျိုးတို့၏အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအား ခိုင်မာအားကောင်းသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်သွားရန် သဝဏ်လွှာတွင် တိုက်တွန်းထားသည်။ (Xinhua)
Update: CPC Central Committee, State Council congratulate Chinese delegation on Winter Olympics achievements
BEIJING, Feb. 20 (Xinhua) — The Communist Party of China (CPC) Central Committee and China’s State Council have sentacongratulatory message to the Chinese delegation for its “best in history” performance at the Beijing 2022 Olympic Winter Games, scheduled to be concluded on Sunday.
Winning nine gold medals, four silvers and two bronzes, the delegation achieved the best results in the history of China’s participation in the Winter Olympics.
The delegation was praised for earning acclaim for China and the people and making important contributions to the success of hosting the Beijing Winter Olympics.
“The motherland and people are proud of your accomplishments,” the message read.
The delegation members have demonstrated their high-spirited morale and sporting prowess as athletes in the new era at the Olympic arena, which vividly interprets the Olympic spirit and Chinese sportsmanship, it said.
They competed and communicated with athletes all over the world and inspired each other, promoting exchanges and enhancing friendship, according to the message.
“Your excellent performance has further boosted the development of winter sports in China and spurred patriotism from all Chinese descendants around the world,” it noted.
The achievements have provided powerful inspiration for building China intoamodern socialist country in all respects, the message read.
The delegation members were urged to continuously improve China’s strength in competitive sports and make new and greater contributions to expanding the gains of “engaging 300 million people in winter sports,” building China intoanation strong in sports and realizing the Chinese Dream of national rejuvenation.
Photo – The Olympic delegation of the People’s Republic of China parade into the National Stadium during the opening ceremony of the Beijing 2022 Olympic Winter Games in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2022. (Xinhua/Wu Wei)
အမေရိကန်သမ္မတ ဘိုင်ဒန်က ရုရှားသမ္မတပူတင်နှင့် မူအားဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်လက်ခံကြောင်း အိမ်ဖြူတော်ပြောကြား